Kitaposin'ny Glass pour politiquement sy fiomanana amin'ny faritra China Manufacturer
Description:Kitapo misy menaka amin'ny polisy,Kitaposima vita amin'ny baoritra fanasan-tongotra,Kitaposima vita amin'ny gorodona ho an'ny fiomanana amin'ny planeta
Home > Products > Pelatanan-jiro > Kitaposin&#39;ny Glass pour politiquement sy fiomanana amin&#39;ny faritra
Kitaposin'ny Glass for Polishing and Surface Preparation Usage:
Kitapo fasika sandika 20-30 # 20-40mesh 30-40 # 40-50 # 50-70 # 60-80 # 70-100 # 80-120 # 100-170 # 120-200 # 140-230 # 170-325 #
Glass vakana vary main'ny rivotra azo ampiasaina amin'ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny aluminium, Stainless vy, varahina, vy, varahina, titane, Sterling volafotsy, varahina, vy, vera, plastika sy fingotra. Azo ampiasaina amin'ny fikolokoloana ny fiara sy ny kamiao izy io. Ny fanamboarana labozia vita amin'ny glasy koa dia fomba fanadiovana mahomby amin'ny fitaovana, kitapo maotera, loha sy entona. Ny fanamboarana labiera dia vidin'ny vidiny ambany ary azo ampiasaina amin'ny sehatra fanangonana, anisan'izany: ny ampahany manokana amin'ny ordinatera sy ny ampahany amin'ny moto.
Ny vidin'ny Blasting Glass Beads dia miovaova eo amin'ny tetikasa ary voafaritra amin'ny karazana sy ny haben'ny tetikasa. Mifandraisa amin'ny Coatings mahasalama amin'ny fifaninanana mba hahazoana ny vidin'ny tetikasa Glass Beasting Blasting.
Kitapo misy menaka amin'ny polisy Kitaposima vita amin'ny baoritra fanasan-tongotra Kitaposima vita amin'ny gorodona ho an'ny fiomanana amin'ny planeta Kitapo fisaka amin'ny polisy Kitapo misy menaka vita amin'ny biriky fanasambe Kitapo mivalona vita amin'ny labiera Kitapo mibontsina mipetaka amin'ny loko thermoplastic Kitapo vita amin'ny vera